विपिन बतासले दायर गरेको साइबर अपराधको मुद्दामा पत्रकार गिरीलाई सफाइ - नेपालबहस
विपिन बतासले दायर गरेको साइबर अपराधको मुद्दामा पत्रकार गिरीलाई सफाइ
८ भदौ, काठमाडौं । साइबर अपराधको मुद्दा खेपिरहेका पत्रकार अर्जुन गिरीले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । जग्गा कारोवारमा कास्कीको पोखराका व्यवसायीबाट ठगिएका दुई जनाको पीडालाई समेटेर समाचार बनाएपछि गिरीले व्यवसायीको मुद्दा खेप्दै आएका थिए ।
चार महिनापछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सो मुद्दाको छिनोफानो गरेको हो । न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको एकल इजलासले गिरीलाई सफाइ दिएको हो । गिरीका विरुद्ध विपिन बतासले साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । विसं २०७६ वैशाख २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले गिरीलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । गिरीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर बोहरा र अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले बहस गरेका थिए । यसअघि गिरीको पक्षमा अधिवक्ता स्वागत नेपालले पैरवी गरेका थिए ।
अघिल्लो लेखनेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष र चीनको बेइजिङस्थित दुताबासका मिनिस्टरबीच भेटघाट
अर्को लेखचाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा समस्या बढ्दै, समाधान कहिले ?
पत्रकार बन्न अब परीक्षा पास गर्नुपर्ने
प्रेस युनियनको नवौं केन्द्रीय महाधिवेशन चैत २१ र २२ गते नेपालगन्जमा हुने
पत्रकार रौनियार र राईको सदस्यता छानबिन गर्न समिति गठन
आईजीपी खनालको उपस्थितिमा डिजिटल नेपाल सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
इन्टरपोलको छलफलअनुसार प्रहरीको निगरानी
अलबिदा ! वरिष्ठ पत्रकार विनय